विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई भन्याे– भारतसँगकाे नाका बन्द गर - चौतारीपोष्ट अनलाईन
एजेन्सीः स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको केन्द्रिय कार्यालयका कर्मचारी यतिबेला कोरोनाविरुद्धको युद्ध मोर्चामा चौबिसै घण्टा खटिरहेका छन्। कोरोनाले सबै महादेशलाई असर गरेको छ। चीनको उहान शहरबाट शुरु भएको यो महामारीले अहिले युरोपलाई आक्रान्त पारेको छ। चीनमा काेराेनाकाे संक्रमण घट्ने क्रममा रहेकाे अवस्थामा विश्व स्वास्थ्य संगठनले इटालीलाई नयाँ ‘इपिसेन्टर’ तोकेको छ।
तत्कालै भारतसँग जोडिएका सिमा बन्द गरिहाल्नुपर्छ। जो आउँछन् नाकाबाट, उनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर १४ दिने क्वारेन्टाइनमा लगिहाल्नुपर्छ। नेपालमा तयारीको अवसर छ अहिले। भोलि संक्रमण फैलिहालेको खण्डमा आपतकालीन संरचनातिर ध्यान दिनुपर्छ। म त फेरि पनि के भन्छु भने यसको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आफूले आफैलाई जोगाउने हो। हुलमुलमा नजाने, हात नमिलाउने र घरमै बस्ने। राज्य बोलेर मात्र हुँदैन। राज्यको तर्फबाट तयारी हुनैपर्छ। अर्कोतिर जनताले पनि राज्यले भनेको मान्नुपर्छ। संक्रमित हुनबाट जोगिने उत्तम उपाय घरमै बस्नु हो। घरमै बस्नुपर्छ। अनि भाइरस नियन्त्रणमा आउन सक्छ।-ब्रेकएनलिंकबाट
Prevके हो क्वारेन्टाइन ? के हो आइसोलेसन?
Nextदुबै छिमेकी सँगका सीमामा यात्रु माथि राेक, ५० कराेडकाे केन्द्रिय काेष